Tsika dzeasia: Tsika dzeAsia uye Tsika | Kufamba Nhau
Maria Jose Roldan | | China, Tailandia, Asia kufamba
Paunofunga nezveAsia, Japan neChina pamwe zvinouya mupfungwa senyika huru, asi chokwadi ndechekuti Asia inoumbwa nedzimwe nyika zhinji uye zvakafanira kuti uzive dzese kuti unzwisise Tsika dzeAsia uye kuti vangave vakasiyana sei kubva kune imwe nzvimbo kuenda kune imwe.
Iyo kondinendi yeAsia inoumbwa nenyika makumi mana nesere: 41 zvakanaka Asia uye 7 Eurasian. Mune chero encyclopedia unogona kuwana mazita eese nyika dzazvino uye iwe unogona kuona kuti ingani nyika dzinoumba kondinendi iyi, asi ini handisi kuzotaura newe nezvetsika netsika dzenyika imwe neimwe, asi ini ndiri ndichataura newe chete nezvevamwe vacho, idzo dzandinofunga setsika dzakasarudzika kana kuti dzinobata pfungwa dzangu uye dzandinoda kugovana newe.
1 Tsika dzeAsia: tsika uye tsika
3 Mutambo wemwenje
4 Hondo yemvura muThailand
5 Bhutsu kure sekuratidzira kwekuremekedza
6 China yemashiripiti nhamba
7 Kwaziso kuChina
8 Ngwarira inki tsvuku muChina
9 Usashandise ruboshwe kuIndonesia
10 Hapana matipi muJapan
Tsika dzeAsia: tsika uye tsika
Pasi rese pane tsika nemagariro akawanda, nekuti mushure mezvose, ndizvo zvinoita kuti tive nemanzwiro ekuva enharaunda. Chokwadi ndechekuti isu vekuMadokero tinogona kushamiswa zvikuru netsika dzeAsia, nekuti mune zvimwe zvinhu zvinoita kuti tinzwe tiri kure navo, asi kune vamwe vanogona kutotidzidzisa tsika dzataisaziva kana isu tisingade kuona. Asia ndiyo kondinendi inogona kutiita kuti tione zvinhu zveasiyasi mune chero nyika dzayo. Asi pasina kunonoka kuenderera mberi, ndiri kuzokuudza nezve dzimwe dzetsika nemagariro zvevanhu vekuAsia zvinogona kukufadza.
Kanamara Matsuri zvinoreva chimwe chinhu senge "Mutambo wesimbi phallus". Izvo zvinodaidzwa nekuti ngano inazvo kuti dhimoni rine mazino akapinza rakanga rakavanda mukati memukadzi wemukadzi mudiki uye panguva yemuchato manheru emukadzi dhimoni rakachekerera varume vaviri saka mupfuri akagadzira simbi yesimbi yekutyora mazino adhiabhori. Kubva pazita iwe unogona kufungidzira kuti mutambo une chekuita nekubereka uye unoitwa wega wega chitubu muKawasaki (Japan). Kunyangwe misi yacho ichisiyana, inowanzova Svondo yekutanga yaApril. Dingindira guru nderekukudza nhengo yemurume, mucherechedzo uripo mubato iri, uye nhare dzinotorwa kuti dziongororwe nezveAIDS.
Mutambo wemwenje unoratidzira kupera kwemitambo yeChinese Idzva uye zvinoitika nemwedzi wekutanga uzere wegore. Ihwo hunokosha husiku, mashiripiti uye akazara nemwenje ayo maChinese anoita kuti ave echokwadi. Husiku kune zviuru zvemarambi nemarambi ayo anozadza dzimba nezvivakwa.
Uyu mutambo unogarwa nemufaro uye kune mafaro, mimhanzi, madhiramu, matambiro, zviputi ... uye mafiraya. Vana vanotakura matochi uye mhuri dzinoungana kuti dzidye mupunga uye dzinodaidzira rombo uye kubatana kwemhuri.
Hondo yemvura muThailand
Iyi tsika yetsika dzeAsia ndeye inonzi Songkran Mutambo uye izororo rakakosha kwazvo muThailand. Songkran igore reBuddhist Nyowani, patsika vanhu vanonyorova zvimiro zvavo zveBuddha uye vanovaratidza rukudzo nenzira iyi. Nekufamba kwenguva tsika iyi yashandurwa uye yave hondo yemvura pakati pevanhu, sekumapati mazhinji erudzi urwu, kazhinji kunowanzove nedoro rakawanda. Izvo zvinoitika paKaan San Road muBangkok.
Bhutsu kure sekuratidzira kwekuremekedza
Imwe yetsika mutsika dzeAsia ine bvisa shangu mumba icho chinhu chakapararira muAsia yose. Izvi zvinoitwa sechiratidzo chekuremekedza kana nekuti pasi panofanira kugara pakachena. Saka kana iwe uchinge uchimboshanyira mumwe munhu anobva kuAsia uye uchienda kumba kwavo, zvichave zvakakosha kwavari kuti iwe usiye shangu dzako kunze kwemusha wavo sekuratidzira kuremekedza.
Unoziva here kuti maChinese anotenda munhamba yemashiripiti? Ehe, ndezve iyo nhamba 8, iyo zvinoenderana nekutenda kweChinese iri nhamba yakanaka kwazvo yerombo ine chekuita nemari nekuvandudza. Kazhinji vanhu vakaroorana vanoda kubudirira vanowanzo roora musi wa 8 wemwedzi wega wega, kunyange zvirinani kana uri musi waAugust 8. Senge izvo zvaive zvisina kukwana, iwe uchave unofarira kuziva kuti Chinese nyeredzi inoumbwa ne 8 zodiac zviratidzo. Ivo zvakare vane makadinari masere, nezvimwewo. Zvakareruka kuitika kana kuti 8 inhamba chaiyo yakasarudzika here?
Iwe unofanirwa kuziva izvo kuChina haina kukwaziswa sekuMadokero, nzvenga kutsvoda nekuti unogona kugumbura mumwe munhu. Zvakanakisa kukwazisana maoko kupa kwaziso ine ruremekedzo. Iyi nzira yekukwazisa inogona kupesana zvakanyanya nekukwazisa kwedu kwerudo kune vanhu vatinokoshesa uye avo vatichangosangana navo.
Ngwarira inki tsvuku muChina
Kana iwe uri mumusangano webhizinesi uye iwe uchida kutora zvimwe zvinyorwa kana kutumira katsamba, usambozviita neinki tsvuku nekuti mimvuri yeruvara irworwo inoshandiswa kune zvisina kunaka mazano uye zvichemo. Saka chinhu chakanakisa chaungaite kuve nepeni ine inki nhema kana yebhuruu muhomwe yako, nenzira iyoyo une chokwadi chekuti haigumbure chero munhu ane ruvara rweingi.
Usashandise ruboshwe kuIndonesia
Munyaya ye Indonezhiya semuenzaniso, haufanire kushandisa ruoko rwako rweruboshwe kupa chinhu kune mumwe munhu sezvo chimiro ichi chiratidzo chekusaremekedza, chero zvakadaro shandisa ruoko rwako rwerudyi. Uye zvakafanana zvinoenda kumhoresa kana chero kusangana nemumwe munhu, ruoko rweruboshwe zvirinani kusaushandisa, zvinogara zvichidikanwa kuve nekodzero yemahara.
Hapana matipi muJapan
Kana iwe ukazviwana uri muJapan, munyika yekubuda kwezuva usambofa wakamira kuresitorendi. Iyo tsika mune yakashata kuravira uye iwe unogona kugumbura munhu akakubata iwe.
Zvakadii neiyo Tsika dzeAsia? Ini ndakuudza nezvevamwe vavo vanobva kune dzimwe nyika dzavo, unoda here kutiudza zvimwe zvaunoziva?
Nyika zhinji dzakashanyirwa muAsia
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » Asia kufamba » China » Tsika dzeAsia
Arsenio Guerra akadaro
Icho chidiki ruzivo, asi kana iwe usina chaunoziva, izvo zvakanaka. chimwe chinhu chinhu uye mazuva ese iwe unodzidza zvishoma
Pindura Arsenio Guerra
Aberdeen, parera muScotland
5 anobatsira maapplication eako anotevera ezororo zhizha